Kakade kade laphela izinsuku lapho isilwane ezitolo nezinhlamvu ngoba izinja angathengwa ngaphandle ngendwangu leash, a collar elula eziqinile nomlomo we ezizibeni lesikhumba. Kuze kube manje, ngenhlanhla, kuhlukile ngempela - kukhethwa ezihlukahlukene izesekeli izinja libanzi ukuze eside futhi ngikhungathekile. Amahhanisi, svorki, ringovki, nezigqizo, isiqophamazwi sokulalela, inayiloni kanye lesikhumba ngezintambo ezinjengenyanga ngoba izinja - lokho kukhona!
Yiqiniso, kungase kudingeke i-ring noma svorka alulona olwawo wonke umuntu, kodwa ngaphandle lapho nje Awukwazi ukwenza noma yikuphi umuntu oyedwa oye wanquma ukuthola inja, kungcono ngaphandle leash. Ngisho inja kakhulu ziziphatha kahle etindzaweni tasemadolobheni akufanele abe abantu ukuba bazihambele ngokukhululekile! Baningi izimoto, nezinye izinja, eminye yayo engase ibe ahluthuke abafowabo bayo, abedlula ngendlela abangase nethuke kohlobo olulodwa, ukuzulazula ngokukhululeka isilwane wosayizi omkhulu ... Futhi lena ingxenye encane nje kuphela sezizathu ezenza yonke inja phakathi komuzi kufanele kube ngaphansi kolawulo aphethe . Kodwa phambili - akusiyo kuphela esebenzisa imingcele inkululeko, futhi bangaba-accessory ye-imfashini futhi stylish, egcizelela isimo umnikazi. Yiqiniso, ukukhetha incike izidingo zakho kanye, yebo, nethuba lemali eningi. Yiziphi ngezintambo ngoba izinja, futhi ngaziphi izinjongo bekhonza, futhi sizobe ukumboza kulesi sihloko.
Ake uqale nge Classics of uhlobo - ngezintambo ngoba izinja eyenziwe lesikhumba (noma leatherette). Nakuba eyodwa kuphela, mhlawumbe, kungatholakala ku arsenal of yimuphi sobakovladeltsa. The pet umelwe ububanzi nje omkhulu lesikhumba ngezintambo, ukujiya ehlukahlukene obuphelele - kusukela vodilok dlala 40 - 50 cm nezinketho zokungcebeleka ukuze 2.5 amamitha. Kusukela elula ukubukeka okukhethekile nombala - nokwelukiweyo embossed zensimbi nangezindlela ezihlukahlukene kuye, noma ngisho ne umhlobiso rhinestones. Konke lokhu ezihlukahlukene ikuvumela ukuba ukhethe noma iyiphi inketho sishaywe nsuku zonke, futhi "encwadini".
Lapho ekhetha leash, uholwe ubukhulu namandla inja yakho. Isikhumba - okokusebenza eqinile ngempela, kodwa iphuzu obuthakathaka leash kungaba enokubamba kwensimbi, noma athola isibhamu kubona, yena nasezinsikeni collar. Kubalulekile kakhulu ukukhetha ngokwenqubo isisindo kanye namandla we inja yakho. Carabiners beze imiklamo ezahlukene, kodwa izinqumo ezifanele, zozela zonke, kufanele okunokwethenjelwa ngokwanele. Lapho uthenga lokuyibhekisisa, umbukiso isiqhebezo izikhathi ezimbalwa ukuhlola, akuyona wanamathela khona. Isikhumba leash akawuthandi umswakama, ngakho-ke kufanele wageza kuphela ezimweni ezimbi kakhulu, njengoba kumele avikelwe emazinyweni inja futhi engathandeki kakhulu ukusebenzisa leash - ke kakhulu unciphise isikhathi sokuphila. Futhi nje ngokunakekela kahle futhi uqaphele ukusetshenziswa lesikhumba leash izothatha iminyaka eminingi.
Ngezintambo ngoba izinja ngendwangu noma inayiloni ubuye ngempela kukho ethandwa. Ziyakwazi anobude obungalingani kakhulu - kusuka ngamamitha 1 kuya ku-15. Ngokuvamile zenziwa kusukela tape, kodwa onobuhle yamuva zithandwa ngenxa "Intambo" of ukushuba ezahlukene. Izinzuzo impahla Umhlahlandlela induku zihlanganisa ukumelana kwabo amanzi (kungenzeka ageze inja ngaphandle kokukhipha izinhlamvu) nge ukungcoliswa kuthiwa kusulwe kalula, ukugqoka nemithi. Ngenxa uhla enkulu imibala, ungakhetha cishe kunoma iyiphi inketho - ekungalayishweni staining omnyama kuze iphethini engacabangeki yonke imibala. Canvas leash kuyoba lesikahle, uma unquma ukuba ahlanganyele ekuqeqeshweni inja - oqinile, okungezona staining, amelana umonakalo. Nokho, uma ukhetha, khumbula ukuthi abahahayo kakhulu bese ukhetha inguqulo eside namanje ngeke kukusize ngalutho, ngoba kulesi simo ubude insalela uyohlale udonse phansi, ke kuyodingeka umoya ngesandla sakhe, bese uyayekela. Ukuze ukuhamba evamile futhi ukuqeqeshwa sessions kwanele leash obuphelele kusukela 3 kuya 5 amamitha.
elula kakhulu jikelele perestezhnye ngezintambo ngoba izinja. Perestezhka ngokuvamile has a ubude mayelana 2 amamitha, futhi sihlukile kwesama leash ezivamile ukuze ubukhulu kungase kushintshwe. Ngenxa yale njongo ke both qeda kukhona latches snap zazo nasezinsikeni emasongweni sise obuphelele ezahlukene futhi ngaleyo ndlela ukushintsha ubude bayo. Leash-perestezhka elula kakhulu uma udinga ngokushesha Bopha inja nomuntu isigxobo noma ukhetha ukufana nesihlahla - lokhu kungenziwa nge ukunyakaza eyodwa nje. Iphinde ingasetshenziswa njengendlela svorku, kokuba abethela kuya carbine ngesikhathi esifanayo nezilwane ezimbili. Perestezhka kuyoba usizo kakhulu futhi abanikazi amatshe amakhulu futhi esindayo njengoba carbines ezimbili, buttoned entanyeni ngesikhathi esifanayo ivumela ngokuphephile ubambe isilwane. Perestezhnye ngezintambo enziwa noma iyiphi impahla - lesikhumba, inayiloni noma ngendwangu.
leash esihle izinja ngesimo neketanga - kuba kunalokho kukho nice "ophumayo" edolobheni noma embukisweni kuka ukusetshenziswa nsuku zonke. Okokuqala, cabangela indaba yobukhulu bawo - awayona eside kakhulu futhi uhambo ezinhle inja kuso iyoba omningi. Futhi, thatha esandleni iketango ngokwayo kuyinkinga, ingasaphathwa yokuthi, uma kunesidingo, sisuke ke esandleni, njengoba kungenziwa nge leash ezivamile impahla noma isikhumba. Kodwa ebusika, ngenxa yezizathu ezisobala, kungcono ukulahla ukusetshenziswa izinhlamvu metal.
Omunye ongakhetha esikahle kakhulu nsuku zonke ohamba leash - a leash Roulette. kokuvela isilwane yethu ezitolo akunjalo kudala, kodwa kakade zithandwa kakhulu futhi funa. Futhi akumangalisi - compact izindlu roulette ukulingana kalula ngisho obucayi isandla esifazane khashana kulula kakhulu ukusebenza, futhi ubude leash ivumela inja ukuhamba kuzo zonke ehlathini eliseduzane, lapho umnikazi imele buthule ku ithrekhi ahlanzekile. Kuyinto cishe ekahle yisiphi zohlobo - kanye toyterera amancane, futhi kuya Rottweiler inja enkulu futhi ihlala ingaphansi kolawulo, futhi ngesikhathi esifanayo ke inesikhala esanele ukuhamba. Roulette beze anobude obungalingani - kusukela amamitha 2 kuya kwezingu-8. Ngaphakathi leash kungenzeka intambo noma ithephu. Tape inketho okuhlala isikhathi eside, kodwa intambo - emfishane futhi engasindi. I nemikhawuko kuphela ukusetshenziswa roulette - ngeke tie inja yakho, noma umzimba wakhe lungaqhekeza baphule. I leash akesabi amanzi, uma kwanele ukuze uthole ezimanzi ukuze ome, edonsa intambo obuphelele walo. Naphezu ububanzi enkulu roulette abakhiqizi ehlukahlukene uma uthenga, ungazami wonge imali - njengoba umthetho, ashibhe amamodeli ngokushesha okukhulu sokudiliza nokulungisa awekho ngaphansi. tape okuhle akuyona ezishibhile, kodwa onokwethenjelwa futhi maqondana nesondlo ezifanele eyokusiza iminyaka 10!
Ingabe kufanele ngingene abayizithulu ikati emhlophe?
Uyini lokushisa evamile e izinja?
Incazelo schipperke zohlobo: ubunjalo isilwane, isithombe
Izinga eliphakeme kunawo kwamagilebhisi iminenke ekhaya: okuqukethwe
Girl ubuhlungu ukubhala: izimbangela kanye nokwelashwa. Kungani ubuhlungu intombazane ukubhala?